Terms And Conditions - IT and Mobile Online Sales in Myanmar | kmdmart.com
KMD – Computer & Mobile
ဆက်သွယ်ရန် : 09444455528
Desktop Computer/ စားပွဲတင် ကွန်ပျူတာ
Commercial Desktop/ စီးပွားရေးသုံး စားပွဲတင် ကွန်ပျူတာ
Consumer Desktop/ စားသုံးသူ စားပွဲတင် ကွန်ပျူတာ
Server Computer/ ဆာဗာ ကွန်ပျူတာ
All In One Computer/ အားလုံးပါဝင်ပြီး အသင့်သုံး ကွန်ပျူတာ
Laptop Computer/ လက်တော့ပ် ကွန်ပျူတာ
Consumer Laptop/ စားသုံးသူလက်ပ်တော့
Commercial Laptop/ စီးပွားရေးသုံး လက်တော့ပ်
Computer Accessories / ကွန်ပျူတာ နှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ
External HDD/ ပြင်ပ HDD
Cables & Converters/ ကြိုးများ နှင့် ခေါင်းပြောင်းကြားခံများ
Mouse Pad/ မောက်စ်အောက်ခံပြား
Keyboard & Mouse Combo/ ကီးဘုတ်၊ မောက်စ် တွဲလျက်
External DVD Drive/ ပြင်ပ ဒီဗီဒီ ဒရိုက်
Sato Wax Ribbon
Mobile, Tablet/ ဖုန်း, တက်ဘလက်
Android Tablet/Android အသုံးပြုထားသောတက်ဘလက်
Mobile Accessories/ ဖုန်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ
Cover/ အကာအကွယ် ကာဗာ
Wireless Charging Pad/ ကြိုးမဲ့ အားသွင်းစနစ်
Mobile's Peripherals/ ဖုန်း အရံပစ္စည်းများ
Car's Charger/ ကားမှတဆင့် ဖုန်းအားသွင်းစနစ်
Gaming System & Gadgets
Gaming System & Gadgets/ ဂိမ်းကစားရန် ကွန်ပျူတာနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ
Gaming Laptops/ ဂိမ်းကစားရန် လက်တော့ပ် ကွန်ပျူတာ
Gaming Desktop/ ဂိမ်းကစားရန် စားပွဲတင် ကွန်ပျူတာ
Gaming Mouse/ဂိမ်းကစားရန် မောက်စ်
Gaming Keyboard/ ဂိမ်းကစားရန် ကီးဘုတ်
Gaming Earphone/ ဂိမ်းကစားရန် နားကြပ်
Gaming Headphone/ ဂိမ်းကစားရန် နားအလုံ နားကြပ်
Gaming Phone/ ဂိမ်းကစားရန် ဖုန်း
Gaming Backpack/ ဂိမ်းပစ္စည်းများ ထည့်ရန် လွယ်အိတ်
Gaming Mouse Mat/ ဂိမ်းမောက်စ် တင်ရန် အောက်ခံအပြား
Other Peripherals/အခြားသော အရံပစ္စည်းများ
Gaming Monitor/ ဂိမ်းကစားရန် မော်နီတာ
Computer Components/ ကွန်ပျူတာ အစိတ်အပိုင်းများ
Learning Software/ သင်ကြားရေးအထောက်အကူပြု ဆော့ဝဲ
Anti- Virus Software/ ဗိုင်းရပ်စ်သတ် ဆော့ဝဲ
Networking Components/ ကွန်ယက် အစိတ်အပိုင်းများ
Electronics / လျှပ်စစ် ပစ္စည်းများ
Washing Machine & Cloth Dryer
Portable Battery Speaker
All Categories Desktop Computer Laptop Computer Computer Accessories Mobile, Tablet Mobile Accessories Gaming System & Gadgets Computer Components Softwares Networking Components Electronics Office Accessories
0 Your Cart0 MMK
Subtotal:0MMK
All products and services – after clicking 'Order Confirm' on page and receivedasuccess order email – will be considered as Date of Sold.
ကုန်ပစ္စည်း ၊ ဝန်ဆောင်မှုများကို Page တွင် 'Order Confirm' ခလုပ်နှိပ်ပြီး၊ Order အောင်မြင်ကြောင်း အီးမေးလ်ကိုရရှိသည်နှင့် တစ်ပြိုင်နက် ပစ္စည်းဝယ်ယူသည့်နေ့အဖြစ်သတ်မှတ်မည်ဖြစ်ပါသည်။
Delivery Date is the date when customer signed on the slip of KMD Shopping.com delivery date.
ဝယ်ယူသူမှ KMD Shopping.com မှပစ္စည်းလက်ခံရရှိသည်ဟု လက်မှတ်ထိုးသည့်နေ့ကို Delivery Date ဟုသတ်မှတ်မည်ဖြစ်ပါသည်။
Apart from Public Holidays, items with following conditions are qualified to return within3working days and KMD Shopping will re-deliver with the same model else non-returnable without any conditions.
အများပြည်သူရုံးပိတ်ရက်များမှအပ ဝယ်ယူသည့်ကုန်ပစ္စည်းများကို အောက်ပါအကျိုးအ ကြောင်းတစ်စုံတစ်ရာဖြင့် ကြုံတွေ့ခဲ့ပါက ၃ ရက်အတွင်းပြန်လည်လဲလှယ်နိုင်မည်။ သို့မဟုတ်ပါကမည်သည့်အကြောင်း ကြောင့်မှ ဝယ်ယူပြီးပစ္စည်းများကို ပြန်လည်လဲလှယ်ပေးမည်မဟုတ်ပါ။
Items are not correct as stated on the invoice. (e.g. wrong color, wrong model).
ဘောင်ချာထဲမှာဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းမဟုတ်ခဲ့ပါက။ (ဥပမာ - အ ရောင်မှားနေခြင်း၊ ပစ္စည်းအမျိုးအမည်မှားနေခြင်း)
Items are unboxed and/or damaged.
A variety of payment methods are available on KMD Shopping as follows:
Bank Deposit option is available on select location.
KMD တွင် လောလောဆယ်တွင် အောက်ပါငွေပေးချေမှု ၂ ရပ်ဖြင့် လက်ခံရောင်းချ ပေးပါသည်။
Confirmation and packing items for delivery
ဝယ်ယူသူသည် ပစ္စည်းလက်ခံရရှိမှ ငွေပေးချေစနစ်ဖြင့် ဝယ်ယူပါက KMD Shopping မှအ ရောင်းကိုယ်စားလှယ်ထံမှ ဖုန်းခေါ်ဆိုမှု ကိုလက်ခံရရှိမှာဖြစ်ပြီး နေရပ်လိပ်စာများကို အတည်ပြုကာ ပစ္စည်းထုပ်ပိုးမှုများနှင့် အိမ် အရောက် ဝန်ဆောင်မှု များကို အချိန်နှင့် တပြေးညီဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
Using Direct Bank Transfer method, customer can provideabank slip or receipt of transfer to KMD Shopping sales team via ecommerce@kmdcomputer.com. As soon as, the payment cleared on KMD Shopping Bank account, the process will start asap.
ဝယ်ယူသူသည် ဘဏ်မှကြိုတင် ငွေလွှဲပေးချေစနစ်ဖြင့် ဝယ်ယူပါက ဝန်ဆောင်မှု ပိုမိုမြန် အောင် Customer မှ ဘဏ်ငွေလွှဲ ဖြတ်ပိုင်းကို ecommerce@kmdcomputer.com သို့ပို့ပေးနိုင်ပါသည်။ သို့မဟုတ် KMD Shopping ဘဏ်ကောင့်ထဲသို့ငွေလွှဲ ဝင်လာသည် နှင့်တစ်ပြိုင်နက်တည်း အိမ်အရောက် ဝန်ဆောင်မှု များကို အချိန်နှင့် တပြေးညီဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
Please use following communication channels for further information.
KMD ဘက်မှ ဝယ်ယူသူလိုအပ်သည်များကို ကူညီနိုင်ရန်အတွက် အောက်ပါ ဖုန်းနံပါတ်သို့ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
Email - ecommerce@kmdcomputer.com
Telephone Number - 09-444455528
၁ Ahlone 4,000 MMK
၂ Bahan 4,000 MMK
၃ Shwegondaing 4,000 MMK
၄ Botahtaung 4,000 MMK
၅ Insein 9,000 MMK
၆ Hlaing 4,000 MMK
၇ Aung San 4,000 MMK
၈ Dagon 4,000 MMK
၉ Pazundaung 4,000 MMK
၁၀ Mingalartaungnyunt 4,000 MMK
၁၁ Dawbon 4,500 MMK
၁၂ Hlaingtharya 6,000 MMK
၁၃ Dagon Myothit East 6,000 MMK
၁၄ Dagon Myothit North 6,000 MMK
၁၅ Dagon Myothit Seikkan 6,000 MMK
၁၆ 7/8 Junction 2,000 MMK
၁၇ Mayangone 6,000 MMK
၁၈ Latha 3,000 MMK
၁၉ Lanmadaw 3,000 MMK
၂၀ Kamaryut 4,500 MMK
၂၁ Mayangone 6,000 MMK
၂၂ Mingaladon 9,000 MMK
၂၃ Pearl 9,000 MMK
၂၄ Thuwanna 4,000 MMK
၂၅ South Okkalapa 7,000 MMK
၂၆ North Okkalapa 7,000 MMK
၂၇ test10MMK
၂၈ Sanchaung 2,000 MMK
၂၉ Tarmwe 4,000 MMK
၃၀ Shwepyithar 9,000 MMK
၃၁ South Dagon 6,000 MMK
၃၂ Taikkyi 9,000 MMK
၃၃ Thaketa 4,000 MMK
၃၄ Thanlyin 9,000 MMK
၃၅ Thilawa 9,000 MMK
၃၆ Thingangyun 4,000 MMK
၃၇ Yankin 4,500 MMK
၃၈ Thongwa 4,000 MMK
Got Questions ? Call us ! Office Hour : 8am to 10pm Facebook Instagram 09444455528
KMD Nay Pyi Taw
+0673 420790, 421349
Pa/143-144, Pywal Yone Tan St,Moy Ma Zay,Nay Pyi Taw.
77 Mobile & IT Mall
09767684174-77, ‎09259020082, ‎09402585453, +95-2-60239, 60360,
No 103/1, 77th st., Bet: 27th x 28th st., Chanayetharsan, Mandalay.
KMD Pansodan Shop
Copyright © 2020 SoftComm Technology. All rights reserved.